Bayabhikisha abaseka owayenguMengameli eGeorgia - Bayede News
Ilokhu intenge njalo imali yakuleli kwezomnotho
Babalelwa ezi-3 000 ababhikishi baseGeorgia ababambe umbhikisho wokweseka owayenguMengameli uMikheil Saakashvili (osesithombeni) ngoMgqibelo ngaphandle kwejele lapho ethi ushaya isiteleka sokungadli. Uphiko lwezokuphepha lukaHulumeni waseGeorgia luthe imibhikisho ibiyingxenye yokuketula umbuso okuhleliwe okwaklanywa futhi kwaqondiswa nguSaakashvili.
Bekubhekwe ukuthi kube nokushuba kwesimo phakathi kwabezokuphepha nabalandeli bamaqembu aphikisayo, kodwa umbhikisho obungaphandle kwejele edolobheni laseRustavi, eningizimu mpumalanga yenhlokodolobha iTbilisi, ubunokuthula. “Abagqugquzeli bemibhikisho bahlela ukuvimba izakhiwo zikaHulumeni,” isikhungo sezindaba saseRussia iTASS sicaphuna umkhulumeli wezokuphepha wombuso esho kanje.“Lezo zenzo okuhloswe ngazo ukuthatha amandla ngendluzula zihlelwa nguMikheil Saakashvili otholwe enecala ejele.”
USaakashvili, oneminyaka engama-53, usesitelekeni sokungadli isikhathi esingaphezu kwenyanga ejele, kusho abameli bakhe, kodwa abaphathi bejele laseGeorgia ngoMgqibelo bashicilele ividiyo eshuthwe ekuqaleni kukaLwezi ebonakala ikhombisa uSaakashvili edla inkomishi encane enesipuni. USaakashvili, owampontshelwa igazi ngasekupheleni kukaMfumfu, uthe odokotela basejele bamnikeze ikhambi eliwuketshezi ngenxa yezizathu zempilo kusukela ngoMfumfu zingama-30.
UMvikeli Womphakathi waseGeorgia, noma umxazululi wamalungelo abantu, abameleli bakhe abavakashele eSaakashvili ejele ngoMgqibelo, wenqaba izimangalo zejele futhi waqinisekisa inguqulo yezenzakalo zikaSaakashvili. USaakashvili ubhekene nesigwebo seminyaka eyisithupha ngemuva kokulahlwa yicala engekho ngowezi-2018 lokusebenzisa kabi amandla kanye nokufihla ubufakazi ngesikhathi enguMengameli, amacala awachithayo njengoba ethi ahlobene nepolitiki.
USaakashvili wahola iRose Revolution ngowezi-2003 eyaxosha umakadebona ongumholi u-Eduard Shevardnadze. USaakashvili wasebenza njengoMengameli kusukela ngowezi-2004 kuya kowezi-2013 ngaphambi kokushiya izwe futhi akhe umsebenzi omusha wezombusazwe e-Ukraine. Waboshwa ngoMfumfu lulu-1 ngemuva kokubuyela eGeorgia ngobusuku bangaphambi kokhetho lwasekhaya ngalokho akuchaze njengomsebenzi wokuhlanganisa abaphikisayo nokusindisa izwe.
Anathi Mtaka Nov 12, 2021